JINGHPAW KASA: ဘုန်းကြီးသောဒီဇင်ဘာ
KIA ကိုအပြတ်ချေ မုန်းမှာ၊
နွေဆိုနွေ - မိုးဆိုမိုးတဲ့
(မနောမြေ - စိန်)
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စား ရေးပေးတဲအတွက်။
မြန်မာနိုင်ငံ တွင်းရှိ တိုင်းရင်း သား လူမျိုး စုံ တို့ ဖြင့်
ဖွဲ့ စည်း ထားသော မြန်မာ့ တပ်မတော် သည် ကချင်
ပြည်နယ် အတွင်းရှိ တိုင်း ရင်းသား ပြည် သူ အပေါင်း
တို့ အား မတရား ဆတ်ကြေး ကောက် မိုင်း ထောင်
အဓမ္မ လူစုဆောင်း ကာ နှိပ် စက် နေ သော KIA ဆို
သည့် ဘိန်းဓားပြ အဖွဲ့ ဝင် တို့ အား တိုင်းသူ ပြည် သား
တို့ ၏ ဆန္ဒ နှင့် တကွ နိုင်ငံ တကာ ၏ ထောက်ခံ မှု နှင့်
အညီ ကြည်းတပ် လေတပ် အစုံ အလင် ဖြင့် ချေမှုန်း
သုတ်သင် တော့ မည် ဖြစ် ကြောင်း သတင်း ကောင်း ပါး
လိုက် ပါ သည် ။ ထို့ ကြောင့် KIA ဘိန်းဓားပြ
သူတောင်းစား အပေါင်းတို့ မသေခင် လေး အော်ခွင့် ရ
တုန်း အော် ချင် ရာ အော် ထား ကြ ပါ။
ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းပါ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေသန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်နေဒါမင်းတို့လိုလူတွေရှိနေလို့ပါ တိုက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလက်ပိုက်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးနော် ကချင်ပြည်မှာမြေသြေဇာဖြစ်ချင်ရင်လာခဲ့ပါ တပ်သားအလုံးအတွက်လည်းစီတ်မကောင်းပါဘူး ခေါင်းဆောင်လက်တစ်ဆုပ်စာအတွက်အသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုူံးခဲ့ရဒါကို ကောင်းစားနေတဲ့လူကပြောနိင်ဒါပေါ့
ဗမာနဲ့ကချင်
လူမျိုးမတူ ဘာသာစကားမတူ ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာမတူ စရိုက်မတူ အရှက်မတူ (အေက်ပြည်အောက်ရွာ သူတောင်းစားပေါသည်၊ ကချင်ပြည်မှာ မရှိ ယခင်က၊ ယခုအောက်ပြည်မှ တက်လာသောကြောင့်ရှိသည်)
သူတောင်းစား မျိုးရိုးများ ဟောင်ချင်တိုင်း ဟောင်သည်
ငါးပိနံ့ က လှိုင်လှိုင်
ကချင်ပြည် မှာ ငါးပိကောင်တွေ လာပုပ်နေလို့တို့၇ဲ့မြေ အပုပ်နံ့နံနေပြီ
ဖာခန်း အ နှိပ်ခန်း စင် တင် ကချင် မတွေ ချည်း ပဲ
စောက်ရှက် မရှိ တဲ့ ကချင် တွေ ။ ကချင် ဖာသည်မ
တခါချ ရင် ၅၀၀၀ ပဲ ။ စောက်ရှက်မရှိ တဲ့ ကချင်
တွေ ပြောတော့ လေကြီး မိုး ကြီး ပြီးတော့
အောက်ပြည် လာ ဖာခံ ကြ တယ်
ဟုတ်လို့လား......??...??? ..? ..........
karai kasang shan hte hpe shan hte myen ni ga de n-ga ja ai hpe mung kan ting hpe chye sha ngun na ten htum wa na aten du mat sai --- YEHOWA hpe hpang ja htum du hkra kam ga -----
myit ma sin ka ta kaw awng pa dang lu ngut sai hpe bang da ga ---tsaw ra ai wun pawng sha ni -------
စောက် ရှက်မရှိတဲ့ ဗမာမလေိုးတွေ မ အေလိုးဆိုတာ ဗမာရာဇဝင် မှာပဲရှိလို့ ဒီစကားက မင်းတို့ဗမာတွေနဲ့ပဲတန်တယ် အ မေကိုတောင် ပြန်လိုးတဲ့ ကောင်တွေ မင်းတို့အပြစ်နဲ့ မင်းတို့ခံရတာ လက်ညိုးလိုက်မထိုးနဲ့ ဝဋ်ပဲကွခံထား
တိုင်းပြည်က ပြည်သူလူထုသာမကဘူး သဘာဝတရားကြီးကပါ ဆန္ဒပြ နေပြီဆိုတာသတိထားပါ ကြွက်ကျလိုက် ဆင်တွေကျလိုက် ငလျင် လှုပ်လိုက် ရေကြီးလိုက် ဖြစ်နေတာ ဘုန်းကြီးတွေကို မီးရှို့ ကောင်းကြသေးရဲ့လား ငရဲပြည် တောင် မှ စိတ်ပျက်နေလောက်ပြီ
ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းပြည်ဆို ကုလားဘုရားကိုကိုးကွယ်နေပြီး ကုလားကို ပြန်အင် နေတာ လူအမျိုးတွေကောဟုတ်ကြရဲ့လား
အပေါ်ကရှမ်းအမျိုးသားကြီး မျိုးချစ်စိတ် ရှိရင် ရှမ်းတပ်မှာတာဝန်သိသိထမ်းဆောင် ပါလား မင်းတို့ဗမာစစ်တပ်ကိုဘယ်သူက ပြည်ထောင် စုလို့သတ်မှတ်ထားလို့လဲ ဗမာစစ်တပ်ကလူက ဗမာပေါ့ ကတုံးရိတ်ထားလို့ ကတော့ ကတုံးပေါ့ ကတုံးအပြောမခံချင် ရင် ကတုံးမရိတ်နဲ့ပေါ့